Nhanho dzekugadzirwa kwemumishinari
Nzira yekukura kwevanhu yakagamuchirwe ine zvikamu zvina, uye nguva inopedza mavhiki masere. Inotanga nemusangano wevarume nevakadzikadzi masero ezvepabonde, kufanana kwavo uye kuumbwa kwe zygote, uye kunopera nekuumbwa kwemukomana.
Ndezvipi zvikamu zve embryogenesis?
Mushure mekusanganiswa kwe spermatozoon nezai, zygote inoumbwa . Icho chiri mukati ma 3-4 mazuva achifamba pamwe chete ne fallopian tubes uye achisvika pachirwere chemukati. Munyaya iyi, nguva yekupwanya inoonekwa . Iyo inoratidzwa nechisimba chakasimba chemajeri. Pakupera kwechikamu ichi chekukura kwebumbiro , blastula inoumbwa - seboka reumwe munhu blastomeres, nenzira yebhola.
Nguva yechitatu, gastrulation, inosanganisira kuumbwa kwechipiri chemashizha embryonic, zvichiita pakuumbwa kwegastrula. Mushure meizvi, chetatu chemashizha mashizha anooneka - mesoderm. Kusiyana nemafuta, embryogenesis mumunhu kunomanikidzwa nekugadzirwa kwemaxiki anxial ezviviri - mazamu ehurongwa hwemitsipa, pamwe chete ne-axial skeleton uye, pamwe chete naro, mutsara inoiswa.
Pakati pechikamu chechina chekusimbiswa kwemuviri wevanhu, rudiments yezviitiko zvenguva uye masangano akaumbwa kusvikira panguva ino akaparadzaniswa. Nokudaro, chirongwa chetsva chakataurwa pamusoro apa chinoumbwa kubva pamashizha embryonic okutanga, uye chikamu chikamu chenhengo. Kubva pamusana wechipiri, epithelial tissue iyo inogadzira chirwere chekudya uye glands iri mairi iripo. A mesenchyme inoumba chibatanidza, chechiratiginous, bone bone tishu, pamwe chete nemashamba ehurumende.
Nemhaka yei kugoverana kwezvikamu izvi kunogona kuputswa?
Zvikamu zvekukura kwevanhu, zvinowanikwa muhwendefa iri pasi, usingaiti nguva dzose pane izvo zvakakosha. Saka, pasi pesimba rezvimwe zviitiko, zvikuru zvisinganzwisisiki, nzira yekukudziridza nhengo dzega uye zvirongwa zvinogona kuvhiringidzika. Pakati pezvikonzero izvi tinokwanisa kusiyanisa:
kukanganisa kwezvakatipoteredza (kutonhora, makemikari, nezvimwewo);
kukanganisa kwekubatana pakati pemasero ega;
Izvi hazviiti zvikonzero zvose zvinotungamirira kukanganisa kwekuvandudzwa kwemukati. Kune dzakawanda zvekuti dzimwe nguva vanachiremba havagone kunyatsoona izvo zvakakonzera kukwidziridzwa kwemu embryonic kukanganisa mune imwe nyaya. Somugumisiro wekuti zvikamu zvekukura kwemuviri wemunhu zvinoputsa kukama kwavo, kusvibiswa kunoitika, zvimwe zvingatungamirira kurufu rwembryo.
Kuputika kwepakona - zviratidzo
Kubwinya kweCentcenta mumavhiki 32
Polinazine panguva yekuzvitakura
Misi panguva yekuzvitakura
Chokeberry prunes panguva yekuzvitakura
Ko Kiwi angave ane pamuviri here?
Zvinoita here kuti vakadzi vane pamuviri vabate meno avo ne aneshesia?
Raspiberi mashizha panguva yekusununguka asati aberekwa
Kunzwa kwekutakura mimba
Cold panguva yekuzvitakura - 1 izwi
Mabhanji kune vakadzi vane pamuviri
Ultrasound mukutanga pamuviri
Zvigadzirwa nemaoko "Magetsi emigwagwa"
Bhegi yekunakidza nemaoko ako
Upenyu hwepabonde shure kwekubvisa pamuviri
Zvine utachiona hwezvokudya zvine chifukidzo
Chii chiri kurota kwemafashamo?
Nzira yekugadzira minion kubva papurasine?
Isitermelon inoshanda here?
Cerebral edema muzvitsva
Grippferon panguva yekuzvitakura
Sean Ashmore akatanga kuva baba
Mazuva ano zvinyorwa zvepamusoro
Sopu nemuchena mutsva mushroom
Zvokudya: kudya zvakasiyana
Mwana wacho ane chigaro chakasununguka
Heather - kudyara uye kutarisira
Chii chakaitwa naTol Holland nekuda kwekuberekwazve muSpider-Man?
Ndezvipi mavitamini ari muzambiringa?
Bharari nhamba pabhanda
Mishonga yefuruwenza uye kutonhora
Pane kuderedza kutonhora 38 kune munhu mukuru?